HomeAfaan OromooOduun dhimma Lammaa Magarsaa waliin wal qabatee miidiyaa hawaasaa irratti deddeebi’u guutuutti soba
Oduun dhimma Lammaa Magarsaa waliin wal qabatee miidiyaa hawaasaa irratti deddeebi’u guutuutti soba.
Oduun dhimma Lammaa Magarsaa waliin wal qabatee miidiyaa hawaasaa irratti deddeebi’u guutuutti soba tahuu Qeerroo Intelligence Group mirkaneeffateera. PPn sochii Qeerroo fi Lammiilee Oromiyaa akkasumas yaada wal fakkaataa rogeeyyii bittinsuuf olola ofumaa facaasani dha. Amma haa hafuuf malee Oromoo kan garbummaatti galche hangafni iyyuu Lammaa Magarsaati. Amma hin dubbannu. Ragaa guutuun garuu nu harka jira. Waan afaan qabatee taa’uufis ni jira. Sababatu jira. Oromoon kana akka seenaatti qabadhuu fuuldurakee qajeelchii deemi.
Lammaa Magarsaa jechuun kitillayyoo diinaa umrii isaa guutuu TPLFf amanamummaa fi if kenniinsaan tajaajilaa ture ta’uu Minaasee W/Giorgis (A.Duullaa) dhugaa baheeraaf. Nama Oromoo fi kaayyoo qabsoo Bilisummaa Oromoo balleessuuf hanga mana hidhaatti qabsaa’ota Oromoo basaasuuf hidhamee tajaajila diinaaf if dararedha. Cichoomina jaalala gabrummaa fi tajaajiltummaa diinaa!
Itti Baha Leenjii Hojjettoota Mootummaa
Hojjetttootni mootummaa Oromiyaa keessaa lakkoofsaan kuma 500 ol tahan torban kana keessa leenjii maqaa gahumsa cimsuu jedhu irra turan. Hojjetootni kunneen garuu gaaffiidhaan PP hudhanii qaban. Gaaffiileen gaafatamaa turan;
1. Isin yeroo filannoo duwwaa maaliif nu barbaaddu
2. Ajjeechaan,hidhaan,ololli isin gaggeessitan yoom dhaabbata?
3. Sobaan nageenyi jira maaliif jettu?
4. ABO fi KFOn akka filannoo keessaa bahan maaliif gootan kanneen jedhanii fi kanneen biroo gaafachuun dabballoota PP hedduu rifaasisan. Dabballootni PP qaanii malee hojjettoota kanaan kan ergama shanee fi wayyaanee qabu isin keessa jira jechuun dubbatan. Hiriira deeggarsaa MCBO fi Mormii sirna PP irratti gaggeeffamu dura dhaabbachuufis amanamtoota isaanii keessaa filuun bakka hiriiraatti argaman. Barattootni, Qeerroon akka hin basaasamne tooftaan bira darbamees jira.